Tsy fantatra mazava izay tena antony fa kosa samy naratra ny roa tonta ary vaky tanteraka ny fitaratr’ilay fiara fitateram-bahoaka. Nijery fotsiny ny olona ary tsy nisy sahy nanasaraka satria samy nitazona hazobe ny roa tonta ka sao hanahirana. Ny niafarany dia samy ireo mpinaman’ny niady ihany no nisintona tsimoramora ny an-daniny sy ny an-kilany.
SIGARA 70 BAORITRA
Sigara 70 baoritra amidy eto an-toerana ihany ny marikany no nisy nahita nipetraka fotsiny teo amoron-dàlana. Teny amin’ny lalam-pirenena faharoa mifanandrify amin’Ambanitsena no hitan’ny olona izany ka nampandrenesina ny mpitandro ny filaminana. Tsy fantatra marina ny momba ireo sigara na tena izy na sandoka. Tsy fantatra koa izay mety ho nanary azy teo amin’ny arabe. Tsy nisy sahy nikitika ny olona ary samy nijerijery fotsiny mandra-pahatongan’ny mpitandro ny filaminana.
INTERNET ETO MADAGASIKARA
Feno 25 taona katroka izao no nisian'ny internet teto Madagasikara. Hatramin'izao anefa tsy mbola afaka tena misitraka izany ny vahoaka malagasy manontolo. Raha toa ka efa mivadika any amin'ny 5 G ireo firenena vahiny, isika tena tsy afaka migoka na ny hatsaran'ny 3 G aza. Eo amin'ny sehatry ny fampiasana tambajotran-tserasera no tena mampihazakazaka ny malagasy 20% eo ho eo amin'izao.